သင်ဖွင့်ပြောစေတည်းဖြစ်ကြ၏၊ဒါကြောင့်ပျင်းစရာဖြစ်လာ၊တစ်ဦးအလိုဆန္ဒအတွက်ပေါင်းသင်း၊မေတ္တာနှင့်ချစ်ခင်စုံမက်။ ထို့နောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပါ။ ေဆှေ၊ရည်းစား၊လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊အဖော်များအတွက်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့်ဆက်သွယ်ရေး၊သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကို။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်တို့အဘို့အရှာကြသည်အနာဂတ်ဇနီးသို့မဟုတ်ခင်ပွန်း? သို့မဟုတ်သင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေအရွယ်ရောက်မိတ်ဖက်?
အဖြစ်များအတွက်အင်တာနက်၊ယခုအများအပြားအခွင့်အလမ်းအသစ်မိတ်ဆွေများနဲ့သိကျွမ်းရ။ ဒီအမျိုးမျိုး၏ချက်တင်၊ဖိုရမ်များ၊ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့အမျိုးမျိုးသောအခြားအထူးချိန်းတွေ့နှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ။ အဆင်ပြေဆုံးနှင့်ထိရောက်သောအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအဖြစ်လိုက်ဆိုဒ်များနှင့်မိုးေပျဉ်ပြားနှင့်ပတ်သက်။
ပိုပြီးအတိအကျရှိပါတယ်၊မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပေါ်ဆိုက်၊ဟုတ်ပါတယ်၊ဒါပေမယ့်အပိုအတွက်ရိုးရှင်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏သင့်ကြော်ငြာ၊အစားထက်အတွက်မလိုအပ်တဲ့အတားအဆီးများအတွက်ဆိုက်အသုံးပြုသူများ။ ဖြည့်စွက်ကာ၊ကျနော်တို့ထောက်ပံ့ခဲ့ကြအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအကူအညီဖြင့်များ၏လူမှုဝန်ဆောင်မှုများ။ ဒီကိုဆိုလိုသည်သင်သာလိုအပ်အနှိပ်အပေါ်ခလုတ်နဲ့သင်မှတ်ပုံတင်ထား။
အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဒါဟာင့်။ သင်အမှန်တကယ်နေရာတစ်ခုကြော်ငြာမပါဘဲမှတ်ပုံတင်။ မဖိတ္ေအသုံးပြုသူများအတွက်မည်သည့်အတည်ပြု၊အတည်ပြုသူတို့ရဲ့ဒေတာမည်သည့်လမ်းအတွက်:မိုဘိုင်းလ်ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာ(စာ)၊အီး-မေးလ်(အတည်ပြုအီးမေးလ်ဖြင့်)၊စသည်တို့ကို။၊ စသည်တို့ကို။
အမှန်မှာကျနော်တို့အစေခံသို့မဟုတ်စုပြုံအချက်အလက်၎င်း၏အသုံးပြုသူများ။ ကျွန်တော်မကြိုးစားပါဘူးကိုအသုံးပြုသူများ’ဒေတာပြီးတော့သူတို့ကိုစေလွှတ်မည်ကြော်ငြာတွေသို့မဟုတ်အခြားသတင်းအချက်အမည်သူတို့ကိုအားပေးတိုက်တွန်းရန်ဆိုဒ်ကိုအလည်စေ။ ဤသည်သာဖြစ်ပါသည်စားစရာသည်ငါတို့အဘို့!
← ေနာ္ေဝကိုကနေတဆင့် သင်ယူနာ္ေဝဘာသာစကား